ကြေးနီခွက်ထဲ ရေထည့်သောက်ရုံနဲ့ ဒီလိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရသတဲ့လားး! – BaHuTuTa
January 30, 2021 admin Lifestyle 0
ဗီရိုထဲမှာအလှထည့်သိမ်းထားတဲ့ကြေးနီခွက်လေးတွေရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကြေး၊ကြေးနီခွက်လေးတွေဟာ အလှဆင်ရုံတစ်ခုတည်းတင်အသုံးဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထက်ပိုကြီးမားတဲ့အသုံးဝင်မှုကြီးရှိပါသေးတယ်။စိတ်ဝင်စားသွားပြီဟုတ်!
ကြေးနီခွက်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကြေးနီခွက်ထဲမှာ ရေတစ်ညထည့်သိပ်ထားပြီးမနက်မိုးလင်းသောက်တဲ့အခါ အခုဖော်ပြမယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာနိုင်ပါသတဲ့။ကြေးနီဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းစွမ်းအင်တွေကိုစုစည်းပေးသလို ကြွက်သားတစ်ရှူးတွေကိုလည်းသန်မာလာစေပါတယ်။သံဓာတ်ကိုပိုမိုရရှိလာစေပြီး လူက နေလို့ထိုင်လို့ပိုပြီးကောင်းလာ ပိုပြီးပေါ့ပါးလာစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်သေးလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး
ဝိုးးးကြေးနီခွက်နဲ့ရေသောက်ပေးရုံနဲ့ အစာချေစနစ်ကို ကောင်းမွန်လာစေပြီး အဆီတွေကို မြန်မြန်ချေဖျက်အားကောင်းစေပါတယ်တဲ့။ပုံမှန်ထက်စာရင်ကြေးနီကြောင့် နှစ်ဆချေဖျက်အားကောင်းသွားတဲ့သဘော။
တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှမလုပ်ရပဲ ပင်ပန်းနေတာတွေ၊ဟိုးနားဒီနားသွားတာနဲ့အလွယ်တကူမောနေတာတွေ ဒီလိုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကြေးနီခွက်ထဲမှာတစ်ညသိပ်ထားတဲ့ရေကိုသောက်သုံးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုပိုပြီးကောင်းမွန်လာစေကာ အသားအရည်ယားယံတာမျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေတော့ပါဘူး။တော်ရုံတန်ရုံအရေပြားရောဂါတွေကို မြန်ဆန်စွာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ကြေးနီမှာပါဝင်တဲ့ antioxidant သတ္တိကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေကို ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဆဲလ်တွေအားကောင်းတဲ့အခါ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Melanin ဆိုတာ အသားအရည်၊မျက်လုံး၊ဆံပင်အရောင်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အသားအရည်တွေဖြူလျော့လာတယ်။ဆံပင်တွေဖြူလာတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ melanin လျော့နည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။Melanin နဲ့ကြေးနီဟာ နေရောင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အသားအရည်နဲ့ဆံပင်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလို Melanin ဓာတ်လျော့နည်းမသွားပဲ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်စေဖို့ ကြေးနီကကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကြေးနီခွက်နဲ့ရေသောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးက အံ့မခန်းလို့ပဲပြောရမှာပါပဲ။
လူတော်တော်များများဟာ အကျိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဂါဝေဒနာခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ဒါက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကြေးနီဓာတ်နည်းပါးလို့ပါ။ဒါကြောင့်ကြေးနီခွက်နဲ့ရေသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် thyroid hormone level ကိုညှိပေးတဲ့အတွက် အကျိတ်သက်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြေးနီမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေလိုပဲ antioxidant တွေပါရှိပါတယ်။ဒီ antioxidant တွေကြောင့် အသားအရည်တွဲကျတာမျိုး၊အရေးအကြောင်းဖြစ်တာတွေကို ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။သူများတွေ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်နေချိန် သင့်မှာတော့ နုနယ်ပျိုမျစ်တဲ့အသားအရည်ကျန်ရှိနေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကမကျန်းမာရင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်း မလန်းဆန်းတော့ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ ကြေးနီကတော့ စိတ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေတဲ့အပြင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအားလည်းကောင်းစေပါတယ်တဲ့။အလွယ်တကူမေ့လျော့တာမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကြေးနီခွက်လေးတွေထဲ ရေထည့် တစ်ညသိပ်ပြီး သောက်တဲ့အလေ့အကျင့်လေးလုပ်ကြည့်ပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။